Nezvedu - Morningstar Stone Co., Ltd.
Runako rwebwe rechisikigo rinogara richisunungura kunaka kwaro kusingafadzi uye huroyi.
MuMangwanani Nyowani iwe uchagara uchipihwa iko kwechokwadi kukosha kwematombo echisikigo.
Morningstar Dombo rakavakirwa pamatombo emakona anoshamisa:
Kushuvira kune yakasikwa ibwe indasitiri
Hunhu ndicho chinhu chekutanga chisingambofi chakakanganiswa
Sevhisi munguva uye nemazvo
Innovation ndiyo isinganeti injini yeMorningstar kuti irambe ichipenya
Kubva pakusarudzwa kwezvinhu zvakasvibirira kusvika pakururamisa kwakarurama uye kwakaringana, Isu tinovavarira kuburitswa kwerunako rusingaenzanisike rwemhando yega yega yedombo rechisikigo nekuedza kukuru kwekushandira pamwe kwedu uye nekuparadza kushoma mune zvehupfumi uye nehunyanzvi. Kugona kukuru kweumwe neumwe mushandi muMorningstar marble vanobatana uye vanogadzira inoshanduka uye yakazara kambani.
Mangwanani nyeredzi yanga yakatsaurwa chaizvo mukugadzirwa kwedombo rechisikigo. Imwe neimwe muMorningstar yakanyatsodzidziswa nehunokosha uye hwakasarudzika hweiyo chaiyo pfuma yeChisikigo. Iyo tambo yekugadzira yese yakagadzirirwa uye inofungidzirwa zvakanaka pamberi pechero zvigadzirwa zvigadzirwa kuti zvigadziriswe. Isu tine yedu pachedu inokurudzira yekutengesa timu kuti tibatsire nekuziva iyo yekugadzira dhizaini kubva kune vedu vatengi kune echokwadi anoshanda chinhanho.
Kubva pabasa diki-diki kusvika kuchirongwa chakanyanya kudakara, Morningstar inotungamirwa kugutsa tekinoroji, aesthetic uye hupfumi tarisiro yevatengi vese vanovimba nebasa redu rakajeka asi rine hunyanzvi.
Zvichakadaro ine yakanaka kwazvo kuunganidzwa kwezviitiko zvinoshandira epamusoro-magumo mapurojekiti. Mhinduro dzakasarudzika dzinodiwa pachikamu chemutambarakede kuti chibudirire zvine mutsindo nekufumura runako rwakaoma-kucherechedza mumatombo, Izvi zvinoda timu yekugadzira neyakagadziriswa ine ruzivo rwakakura mumabhururu emarble uye echisikirwo emabwe.
Dombo rimwe rekumisa sevhisi